Fihla i-xR Drives Alok's Dynamic 'Alive' Music Special Live Streamed in Brazil | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » Fihla iXR Drives Alok's Dynamic 'Alive' Music Special Live Stream eBrazil
Owona mboniso ubalaseleyo we-DJ waseBrazil ngo-2020 wenzeka kwi-xR, njengoko u-DJ wasekhaya kunye nemvumi uAlok etsala abantu abangama-750,000 kuye Umsinga 'ophilayo' ngoDisemba, kwakhona iwotshi yezigidi ezisixhenxe kwi-YouTube. Ukuzifihla kokuhamba komsebenzi kwe-xR kuqhube umculo okhethekileyo nge-vx 4 media server kunye namaqonga amabini e-rx enza ukuba umboniso ubandakanye umxholo wokukhokelela kwiinjini ezikhokelayo Unreal, Unity and Notch.
I-Alok yenye yeempawu eziphambili kumculo we-elektroniki waseBrazil. Wabizwa ngegama Forbes U-Brasil njengomnye wabantu abanempembelelo engaphantsi kweminyaka engama-30 kweli lizwe. Ukulandela ukurhoxiswa kwayo yonke imiboniso yakhe ebonakalayo kulo nyaka uphelileyo, injongo ye-xR yokusasaza ngqo yayikukuzisa indlela entsha yokusasaza ukusebenza kwegcisa kwi-fanbase yakhe enkulu.
UMlawuli weProjekthi uFabio Soares ovela OkeStudio Kunye neTheForce bameme inkampani yase-Sao Paulo esekwe kwinkonzo ye-AV maxi ukubonelela nge-xR ukuhamba komsebenzi kumdlalo, kunye nokufihla ingcali yokuhamba komsebenzi uTito Sabatini kwinkxaso yobuchwephesha. I-Alok ekhethekileyo yokuntywiliselwa kwindawo ezinamandla, ezihlala ziguquka ezinamahlathi amibalabala amakhowa atyhidiweyo kunye nemithi, imilambo yamasuntswana egalactic, ii-synapses, i-shards ezimenyezelayo zomkhenkce, izixeko ezakhayo nezinyibilikayo.
Inkxaso yokuzifihla "yayiyinto esingenakuphila ngaphandle kwayo," UJose Augusto Martins, uMlawuli oLawulayo eMaxi, uxela. “Ngeprojekthi enkulu enje ngale kwaye bonke abasebenzi bevidiyo yeetekhnoloji befunda ukusebenzisa i-xR, inkxaso yokufihla eyona nto ibalulekileyo. Kusinike ukuzithemba kokuqhuba izinto ngokufanelekileyo. Sifuna abantu bazive amandla omboniso wokwenyani kwaye kufezekisiwe.
"'Alive' yayiyiprojekthi enkulu yeXR, kwaye besiyenza okokuqala eBrazil, ke ngoko safunda okuninzi ngexesha lokwenza iprojekthi ibe yinyani," wongeze watsho uJoseph.
UMaxi wayekuphela kwenkampani yokurenta enesixhobo sokuhambisa imveliso yeXR, utshilo. Njengoko isishwankathelo sobuchwephesha besifuna ukusetyenziswa kwazo zontathu izinto eziphambili ekunikezeleni iinjini ezingasasebenziyo, Ubunye kunye neNotshi, kunye nokutshintsha kweekhamera ezininzi ezineekhamera ezilandelelweyo zisebenzisa inkqubo yokulandelela i-Estabili, ukuzifihla yayikuphela kwesixhobo esinakho ukuhambisa okufutshane, uTito ucacisa. "Ihambisa i-agnostic kwaye iyakwazi ukuphatha ukutshintsha kweekhamera ezininzi, ikhowudi yexesha elandela izikhombisi ze-DJ kunye nokunye."
Iqela laseMaxi lajongana nomhla obekiweyo wokufunda imibhobho kuzo zontathu iinjinjini kunye nokuseta umkhondo weekhamera ezine, ngelixa inceda wonke umntu obandakanyekayo ukuba aqonde ukuhamba komsebenzi we-xR kunye nendlela eyenza ngayo imveliso ebonakalayo.
"Lo ibingumveliso omkhulu, kwaye ukuzinikela kwabo bonke abantu ababandakanyekayo kuyenzile," utshilo uTito. “Emva komboniso, umphathi ka-Alok kunye neqela labasebenzi belinemvakalelo, bexolile kwaye bonwabile. Izimvo zoluntu zazimangalisa ngokunjalo; abantu abasuka kwimizi-mveliso eBrazil beze kusivuyela, kwaye ibiyimvakalelo emnandi leyo emva konyaka omubi kangaka kushishino lomculo. ”
UJose ukholelwa ukuba i-xR inekamva eliqaqambileyo kwimakethi yomculo ophilayo, izisa abasasazi kunye namagcisa kuyo nayiphi na imeko enokubakho. "Ndicinga ukuba obu bubuchwephesha obenza ukuba wonke umntu athi, 'Wow!'” UMaxi sele eyikhethile enye i-xR gig kwikhalenda njengoko umlobi we-rap uCriolo ephila ehambisa ikonsathi ekhethekileyo kwi-Extension Reality nge-23 kaJanuwari.
UMlawuli wezoBuchule: UFabio Soares
Umvelisi oLawulayo: UFernanda Padrão
Umxholo we-xR: i-OkeStudio kunye neTheForce
xR UMlawuli wezoBuchule: uLuciano Ferrarezi
xR Umlawuli womxholo: Dejumatos
AbaLawuli beXR kwezobuGcisa: UTito Sabatini noGabriel Weckmuller
Iqonga lobuchwephesha lokuzifihla lenza ukuba iingcali zoyilo kunye nezobuchwephesha zikucinge, zenze kwaye zihambise amava obonakalayo obonakalayo kwinqanaba eliphezulu.
Ukudibanisa ixesha lokwenyani le-3D-isoftware esekwe kwisoftware kunye nokusebenza okuphezulu kwezixhobo, ukufihla kuzisa iiprojekthi ezinobunzima kwinqanaba kunye nokuzithemba. Ukuwongwa kokusebenza kwayo okutsha okuphumeleleyo okwandisiweyo (xR) kukuxhobisa abasebenzisi ukuba bazise ebomini amava okuntywila akhuthazayo kwaye abandakanye abaphulaphuli abakude kuyo yonke indawo.
Fihla i-xR sele inike amandla imveliso yexesha lokwenyani yeemvumi zomculo ezinje ngoKaty Perry noBillie Eilish, amashishini amashishini afana ne-SAP kunye neLenovo, amaziko emfundo afana neDyunivesithi yaseMichigan, asasaza iinkqubo zeTV ezinje ngeMVV Video Music Awards kunye neMelika's Got Talent, ezentengiso Iimpawu ezinje ngeNike kunye naphantsi kweArmor kunye namanye amava amaninzi kumazwe angaphezu kwama-30.
Ngonxibelelwano lwamaqabane olwandayo lwehlabathi kunye nokusebenza kunye nabayili abanobuchule obuninzi behlabathi kunye namaqela obuchwephesha kwiminyhadala ebukhoma, usasazo lweTV, iifilimu, ukhenketho lwekonsathi, indawo yemidlalo yeqonga, ufakelo olusisigxina kunye nemisitho yecandelo kunye nolonwabo, ukufihla kwakha isizukulwana esilandelayo sentsebenziswano izixhobo zokunceda amagcisa kunye neetekhnoloji baqonde umbono wabo.
Ngolunye ulwazi, nceda u tyelele www.dinoduse.one
Previous: I-Neve® 8424 Console izisa ukuThintela ukuNgena kuMsebenzi kaMike Smith
next: Crew kwiBhokisi isebenzisa i-Pocket Cinema Camera 6K kunye ne-ATEM Mini Pro ye-MTV Movie & TV Awards: Elona xesha libalaseleyo